Mohamed Salah oo u dhashay dalka Masar ayaa loo doortay inuu noqdo ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee BBC African Footballer of the Year ee 2017.
Abaal marinta uu helay ciyaariyahan Mohamed Salah waa abaal marin sanadle waxaa bixisa sanad waliba BBC-da waxaana codeeyda kumanaan qof oo ku nool qaarada Africa waxaana sanadkan ku guuleystay Mohamed Salah oo Masar iyo Liverpool ka tirsan.
Ka dib markii uu helay codad rikoor ah, xiddiga Liverpool ayaa ka guuleystay xidiga qaranka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, Guinea laacibka ka soo jeeda ee Naby Keita, Sadio Mane oo Senegal ah iyo Victor Moses.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto abaalmarintan" ayuu 25 jirkaan u sheegay BBC Sport.
"Had iyo jeer waa dareen gaar ah marka aad wax ku guuleysaneyso, waxaan dareemayaa inaan sanadkaan wanaagsanaa, waana ku faraxsanahay."
Salah, oo ah gooldhaliyaha ugu sareeya Premier League oo dhaliyay 13 gool, ayaa ku riyaaqay sannadkii fiicnaa labada dhan koox iyo wadanba.
Horaantii 2017, weeraryahanku wuxuu ahaa bartilmaameedkii ugu weynaa ee Masar markii ay ku dhameysteen kaalinta labaad ee Koobka Qaramada Afrika.
"Waxaan doonayaa inaan noqdo midka ugu wanaagsan Masar, si aan u shaqeeyo," ayuu raaciyay Salah, oo ah ciyaaryahanka seddexaad ee Masar ka hor inta uusan ku guuleysan abaalmarinta tan iyo 2008dii.
"Waxaan mar walba raacaa waddadayda, waxaanan rabaa qof kasta oo Masar jooga in ay raacaan wadadeyda."
Qaabka Salah ee heerarka kooxda ayaa ah wax walba oo cajiib ah sida ay u leedahay caalamka.
waxa uu bandhig wanaagsan ka sameeyay sanadkii la soo dhaafay kooxda Roma waxa uu ka caawiyey inay ku dhameystaan kaalinta labaad ee horyaalka Serie A, todobaadyadii ugu fiicnaa horyaalka, ka hor inta uusan ku biirin Liverpool, islamarkaana dhaliyey 13 gool 16 kulan oo horyaalka ah.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo asxaabteyda kooxda Liverpool, sidoo kale xilli ciyaareed fiican ayaan la qaatay Roma, waana inaan u mahadceliyaa saaxiibadeyda kooxda iyo asxaabteyda xulka qaranka" ayuu yiri Salah.
Masar iyo xiddiga Liverpool Mohamed Salah waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan Premier League, isagoo dhaliyay 13 gool
"Tan iyo markii aan halkan imid, waxaan doonayay inaan si adag u shaqeeyo oo aan tuso qof walba kubada cagta, waxaan doonayay inaan ku laabto Premier League tan iyo markii aan ka tagay, sidaasi darteed aad ayaan u faraxsanahay".
"Waa wax u qalma," ayuu yiri tababaraha Liverpool Jurgen Klopp, oo ku guuleystay abaalmarinta cayaartoyda tababarka Melwood ee tababarka kooxda.
"Waxaan ahay qof nasiib badan, waxaan haystay fursado aan kula shaqeyn lahaa ciyaartoy dhowr ah, waana ku faraxsanahay in hadda la joogo Mohamed Salah.
"Waa wax wanaagsan in uu weli yahay da'yar, waxaa jira boosas badan oo horumarin ah, wax badan oo suurtagal ah oo aan awoodno inaan sii shaqeyno, laakiin taasi waa sida ay tahay inay ahaato, waa farxad weyn, inaad daacad u ahaato inaad la shaqeyso isaga. "
Salah oo ku guuleystay abaalmarinta BBC African Footballer of the Year, ayaa magaciisa ku qoray liiska halyeeyada oo ay ku jiraan Jay-Jay Okocha (Nigeria), Didier Drogba (Ivory Coast) iyo Michael Essien (Ghana).
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto abaalmarintan," ayuu yiri Salah, oo raacay asxaabta Maxamed Barakat (2005) iyo Maxamed Aboutrika (2008) iyagoo helay abaalmarinta.
Waa kuwee ciyaartooyda abaal marintan horay ugu guuleystay?
Cayaaraha 18.12.2018. 13:27